Heater fanesorana fanosorana induction ho an'ny fanamainana | fanesorana fingotra
Home / Indoneziana fanasan-tanana / Fanamafisana ny fanesorana ny firakotra
Sokajy: Indoneziana fanasan-tanana, fanesorana ny famafana induction Tags: mividy heater fanesorana coating, fanesorana coating, fanafanana fanesorana coating, manala manala, fanesorana haingana kokoa, fanesorana fonosana fampidirana, fanamainana fanesorana induction, induction heater fanesorana palitao, fanamafisana induction ho an'ny fanesorana ny coating, fanesorana fingotra
Induction Coating Removal Heater-Induction Rust Paint Coating Removal Machine
HLQ Lavitra lavitra fanamainana fanesorana induction dia misy mpamorona hafanana fampidiran-drivotra antonony, tariby lavitra ary loha fanafanana tanana. Ny elanelam-potoana dia manomboka amin'ny 30 ka hatramin'ny 60KW, ary ny faharetan'ny output 20KHz manodidina, ny halavan'ny tariby dia mety ho 20 na 40m ny halavany. HLQ fanamainana fanesorana induction Azo ampiasaina amin'ny fanafanana ny fanesorana ny palitao, ny fanesorana ny fingotra, ny fanesorana ny loko, ny fampitambarana varahina, ny fantsom-bokatra varahina, ny fanafanana ny tany, sns
Teoria miasa sy acteristics
Ny milina fanamafisam-peo HLQ dia mampiasa circuit oscillating andian-dahatsoratra, mamadika ny herin'ny haavo avo lenta amin'ny alàlan'ny cap transformer sy oscillating amin'ny lohan'ny fanafanana, ary avy eo mamoaka ny coil ho an'ny fanafanana.
Ao amin'ny heaters fanesorana hosodoko HLQ, ny haitao fahatelo farany misy antsika izay teknolojia fanodinana sy fanitsiana dia noraisina mba hahatsapany ny fifandimbiasan'ny singa IGBT sy ny fanitsiana tsy miankina ny herinaratra sy ny fahita matetika, mba hahatratrarana ny fiasa mahavariana amin'ny masinina.
modely DWS-25P DWS-30P DWS-60P
Ny fahefana manintona Max 25kw 30kw 60kw
Fiatrehana lohahefan-doha 20M 20-40M
Frequency output 20-50KHz
Output ankehitriny 5 ~ 45A 6-54A 12-108A
Output malefaka 70 ~ 520V
fahan'ny malefaka 380V, 3phases, 50 / 60Hz
Dingana famaranana 50%
Cooling water ≥0.5MPa ≥30L / min
Rano anaty anaty rano Eny
Weight gropy 280KG 316KG 580KG
Fiatrehana loharano 2.2KG 2.7KG 4.5KG
Size / sm gropy 103L × 750W × 156.6H 103L × 750W × 156.6H 70L × 40W × 103.5H
Fiatrehana loharano Ф6.5 × 16.5L Ф8 × 18.5L Ф11.8 × 24L
Ahoana ny fanesorana ny fonosana | Asa fanendahana induction?
fanesorana fonosana fampidirana | Fanendahana induction dia dingana iray fanomanana ny etona mafana. Ny mpamindro fampidirana induction dia mandefa arus mifandimby amin'ny alàlan'ny coil induction, izay miteraka saha elektromagnetika. Ity saha ity dia mitaona ny onja izay niova ho hafanana mifandraika amin'ny fitaovam-pitaovana toy ny vy. Ny hafanana dia miteraka ao ambanin'ilay firakotra, ka mahatonga ny fonosana hikopaka haingana. Ity fomba ity dia mety amin'ny fitsaboana ny faritra fisaka na miolaka eo amin'ny toeram-piasana ary tsy mila fitanana.
The fanesorana fonosana fampidirana| ny rafi-pamoahana induction dia hanaisotra ny loko, ny firakotra hafa, ny harafesina lehibe, ny harafesin'ny bakteria ary ny diloilo ary ny menaka manosotra amin'ny alàlan'ny herinaratra (vy ferromagnetika) manapaka ny fifamatorana eo anelanelan'ny fitaovana sy ny residu etch substrate, ny induction fanafanana voarindra ary voafehy izay mandany angovo faran'izay kely.
HLQ dia manatsotra ny filanao fanesorana coatings amin'ny alàlan'ny teknolojia revolisionera iray hafa: Induction Stripping! Ny fitaovana fanonganana induction HLQ dia manala ny fonosana mafy indrindra amin'ny rafitra vy tsy misy tabataba na fako faharoa — midina hatrany amin'ny vy.
Raha efa naniry ny famosaviana majika hamaha ny aretin'andoha fanesorana ny palitao ianao, ny HLQ dia manana ny zavatra tsara manaraka. Ny teknisiana HLQ dia afaka manofahofa ny lohanay induction amin'ny loza manarona anao ary manala ny sasany amin'ireo sarotra indrindra hanesorana coatings amin'ny taha izay mahatratra 10 heny haingana kokoa noho ny teknolojia mifaninana toy ny sandblasting. ! Rehefa manetsika ny lohanay hidiran'ny vy ny teknisiana HLQ dia mamorona hafanana ampy (mazàna 300 ka hatramin'ny 400 degre) hamaha haingana ny ankamaroan'ny firakotra avy amin'ny fiara mifono vy, tanker, fantsom-pitaterana, sambo ary lampihazo amoron-tsiraka, mamela ny firakotra (hatramin'ny hatevin'ny 1-inch) esorina anaty lambam-pandriana.
Fanesorana ny fitrandrahana hafanana RPR
Fanesorana ny firakotra RPR Heat Induction miasa amin'ny fitsipiky ny fampidirana. Ny hafanana dia miteraka ao anaty lasitra vy ary tapaka ny fatorana amin'ny vy sy ny firakotra. Ny fonosana dia esorina tanteraka nefa tsy mikorontana ary afaka tanteraka amin'ireo mpametaveta mandoto, izany hoe. haino aman-jery fipoahana. Izany dia manamora ny fanariana sy fanodinana ny fako ary mahomby kokoa.
Miaraka amin'ny fanjifana herinaratra farafahakeliny na dia ny fonosana matevina sy sarotra indrindra aza dia azo esorina tanteraka. RPR Heat Induction dia haingana kokoa noho ny fomba mahazatra. Ny fomba mangina fanesorana ny sarona dia midika fa afaka miasa andro aman'alina ireo injenieranay nefa tsy misy loto mandoto.
Noho ny tombony maro amin'ny fizotran'ny fanafanana anay, afaka nanome mpanjifa Alliance maro karazana izahay amin'ny serivisy ilain'izy ireo. Niara-niasa tamin'ny mpanjifa tamin'ny indostria toy ny:
Solika sy gazy
Fanodinana sakafo sy zava-pisotro
Serivisy fivarotana sy sakafo
Hotely sy fandraisam-bahiny
Doboka sy aquarium
Ny fizotran'ny fifamatorana fampidirana valanoranon'ny HLQ dia manala ny ankamaroan'ny karazana sarona, ao anatin'izany:
Epoxy amin'ny saribao
Chartek fireproofing na fonosana hafa
Haingana kokoa, mangina, madio kokoa, fanomanana ambonin-tany azo antoka
Fomba haingana, azo antoka ary madio kokoa amin'ny fanesorana ny firakotra indostrialy amin'ny sehatry ny vy.
Mety hisy ny hilaza fa ny fanalana ny induction no fomba “haingana sy maloto” hanatanterahana ilay asa, fa raha ny marina dia haingana, ary tsy mikorontana mihitsy. Satria ny famafana ny induction dia tsy miteraka fako faharoa, manadora ny fanadiovana. Ny fiatrehana takelaka na kofehy mifono dia mora lavitra noho ny mifanatrika amin'ny haino aman-jery na vovoka.
Amin'ny tranga maro dia azo tsotsorina na esorina tanteraka ny fifehezana. Alao sary an-tsaina ny fanesorana ny tetikasa scaffolda sy fikojakojana lafo vidy ary hosoloina snorkelie sy lamba mitete!
Ny varotra hafa dia afaka miasa eo akaikin'ny hetsika fanaovan-tsolika HLQ satria dingana mangina tokoa izany ary tsy hamorona tabataba manimba izay manakorontana ny famokarana ataon'ny mpandraharaha hafa mety miasa amin'ny tetikasanao.
Ny fitaovantsika fanosorana induction dia tsy misy faritra mihetsika, mahatonga ny fizotrantsika ho azo antoka kokoa noho ny fanapoahana rano na fasika ho an'ny mpiasanao, ireo mpandraharaha hafa, ny mpanjifa ary ny mpandalo.
Ny fampidirana RPR dia manaisotra ny loko, ny firakotra, ny harafesina matevina, ny harafesin'ny bakteria ary ny sisa tavela amin'ny menaka sy solika avy amin'ny sehatry ny herinaratra (vy, sns.) Amin'ny alàlan'ny fanapahana ny fifamatorana eo anelanelan'ny fitaovana ho esorina sy ilay substrate mampiasa alàlan'ny fanamainana induction voafaritra miaraka amin'ny mini - fihinanana angovo azo avy amin'ny reny.
The fanamafisana ny famokarana induction
Ny mpanamboatra fampidirana RPR dia mandefa arus mifandimby amin'ny alàlan'ny Indonezianina fanalefahana, izay mamokatra sahan'andriamby elektrika. Ity sahan'andriamby ity dia mampiditra ny ony eddy amin'ny vady mifehy toy ny vy. Noho ny fanoherana ny vy, ireo onja ireo dia navadika ho hafanana = fanafanana fampidirana. Ny hafanana dia miteraka eo ambanin'ilay palitao, ka miteraka famafana haingana sy madio.
RPR Heat Induction dia miasa amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny fampidirana. Ny hafanana dia miteraka ao anaty lasitra vy ary tapaka ny fatorana amin'ny vy sy ny firakotra. Ny fonosana dia esorina tanteraka nefa tsy mikorontana ary afaka tanteraka amin'ireo mpametaveta mandoto, izany hoe. haino aman-jery fipoahana. Izany dia manamora ny fanariana sy fanodinana ny fako ary mahomby kokoa.
Miaraka amin'ny fanjifana herinaratra farafahakeliny na dia ny fonosana matevina sy sarotra indrindra aza dia azo esorina tanteraka. Hafanana RPR Fanamorana ny induction dia haingana kokoa noho ny fomba mahazatra. Ny fomba mangina fanesorana ny sarona dia midika fa afaka miasa andro aman'alina ireo injenieranay tsy misy loto mandoto.
Ny rafitry ny RPR dia mety amin'ny fanesorana loko, harafesina ary firakotra hafa (fingotra vita volo, protecteur d'exploitation, epoxies, sns. Miaraka amin'ny fahafaha-mifehy ho an'ireto asa manaraka ireto:
• Fanjifana angovo
• Fanapahana ny maripana
• Midirana amin'ny hafanana
• Hafainganana fanesorana
Miaraka amin'ny fahafaha-mametraka etsy ambony, ny RPR dia manome fahombiazana tsy mitovy ary ny rafitry ny safidy ho an'ny fanesorana ny fonosana ambonin-javatra mahomby, azo antoka ary sariaka amin'ny tontolo iainana avy amin'ny substrates vy.
Ny RPR dia mety indrindra amin'ny: fantsona an-dranomasina, fiara mifono vy, seranana an-dranomasina ary avy any an-tany
Fampandehanana an-tariby fanindroany
Fampandrosoana fampandrosoana finday 6KW
milina fanosihosena portable